Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Wufuuda ONLF oo sida Roobka Ogadenya ugu Shubmaya & Taageerayaasha oo sida Dhirta usoo fufaya Xawlina kusocda! By- Xaaji M/rashiid
Maqaal: Wufuuda ONLF oo sida Roobka Ogadenya ugu Shubmaya & Taageerayaasha oo sida Dhirta usoo fufaya Xawlina kusocda! By- Xaaji M/rashiid
Posted by ONA Admin	/ October 2, 2018
Bismillaah- Aduunyadu waa hadh wareegi iyo hooska labadiisa galin, inta caqliga iyo garashada usaaxiibka ahina way fahmeysaa, balse waxaa ku kadsoomaya inta fahankoodu ku egyahay waxay ishoodu qabato oo kaliya. Sidaad la socotaan Qaarada Afrika inteeda badan waxaa kajira deganaasho iyo xasilooni markii laga reebo wadamada dhaca Geeska oo iyagu marti galinaya dagaalo iyo qaxooti farabadan. Waxaa saldhig u ah marka koobaad cadaalad darrada oo ku dhex faaftay, marka labaadna Qadiyada Ogadenya oo xalkeeda lagacan bidixeeyay.
Run ahaantii isbadalo waawayn oo xawli kusocda ayaa Gobolka hadheeyay, waxaana kamid ah isbadalka maamuka degaanka oo madaxwayne cusub yeeshay bulshaduna si aad ah usoo dhawysay. Waxaa kale oo kamid ah ciidankii Liyuuga loo yaqaanay oo dariiqa wanaagsan cagta loo saaray loona cadeeyay in dhaqankoodii hore ay waxbadan ka qaldanaayeen, taasoo nasiib wanaag ay garwaaqsadeen. Waxaa sidoo kale kamid ah isbadalada waawayn ee lataaban karo, soo galitaanka ciidanka xoreynta Ogadenya oo magaalooyinka iyo daka booqanaya salaantana la isku boobayo, kadibna lawada qadeynayo. Wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaarkii ay suuxayaan ama ooyayaan markay indhaha ku dhuftaan Naftood,hurayaasha.
Sidaad la socotaan waakii wadanka laga qaxay lagasoo bilaabo 1994 ilaa sanadkan la joogo isagoo lakala aaday wadamada jaarka iyo wadamo kale oo aad uga durugsan Gobolka, sida Amerika, Yurub, Asia iyo dunida Carabaha. Waxaa meelahaas laga aas aasay jaaliyado halgameed iyo maamulo hoos yimaada Halganka, sida ururka Haweenka, ka Dhalinta, ka Culimada iyo kuwo kale. Waxaa kale oo qurbaha kaga soo biiray xubno tirobadan. Markuu isbadalku ka dhacay guud ahaan itoobiya islamarkaana daaqada laga tuuray sharci kusheegii argagixisada ku tilmaamay ururada xaq udirirka ah waxaa loo arkay inay tahay fursad dahabi ah.
Ururwaynaha ONLF wuxuu kaga jawaabay arintaas inuu ku dhawaaqo xabad joojin ilaa maantana lama hayo askari jabhada kamid ah oo riday hal xabad ah, waana daliil cad oo muujinaya heerka uu gaadhsiisanyahay kala dambaynta jabhadu. Intaa kadib waxaad ogtihiin inay Wufuuda jabhada iyo taageerayaashii kusugnaa Qurbaha iyo wadamada dariska ah ay sida Roobka isugu shubeen Ogadenya. Talaabadaasi waxay sababtay inay bulshadii waqtiga dheer beerka dhulka ku haysay soo fufto sidii dhulkii gubadka ahaa usoo fufi jiray markuu Roobku helo. Dadka wajiyadooda waxaa ka muuqda farxad aan la qiyaaasi karin iyagoo wufuuda ku qaabilaya Qalbiyo iyo gacmo furan. Ajandaha loo gudbinayo waa fariin kooban oo ah iscafis, midnimo iyo soomaalinimo. Taasaa dadka farqaha loogu guntayaa oy guryahoodii la aadayaan!.
Intaa kaliya ma aha waxyaabaha Geeska kasocda ee cajiibka ah waxaana kamid ah wufuuda jabahada ee dhexmushaaxaya wadamada dariska ee loosoo dhawaynayo qaabka dawliaga ah iyagoo umuuqda kuwo ku naaloonaya gargaarkii ilaahay ee ay mudada dheer ka dhur,sugayeen. Waxaan filayaa inay soomaalidu aad ula yaabantahay maskaxda ay jabhadu adeegsanayso ee ah inaan laga falcelinin dambiyadii ay wadamada jaarka ahi ka galeen halganka iyo dadkiisa!
Waxaaba taas kasii daran in iyaga safar loo galayo si loosoo salaamo loona hoga,tusaaleeyo in umada somaliyeed ayna kala maarmaynin! Bal wakaasi akhristoow adigaan kuu dhiibaye yaa kale oy maanta taasi ka suurto gali kartaa oon JWXO aheyn!. Waxay dad badan oo soomaaliyeed lasoo taaganyihiin inay tirtiriyaan gafafkii laga galay waayo hore oy waliba udardaarmaan Caruurahooda!.
Ugu dambayn markii intaa oo dhan laga yimaado waxay shucuubta Geesku isha ku haysaa guulaha kale ee Ururwaynaha ONLF soo hooyin doono asbuucyada fooda inagu soo haya idanka Ilaahay .